Taona : a.: Tatitra entana na zavatra hafa ho amin'ny toerana hafa. • Fitarihana olona hafa hanaraka ny hevitry ny tena. - t.i.f.: Taomina, voataona / mitaona, fitaona, mpitaona / itaomana, fitaomana / mahataona. Ahitsio
Taontaona : p. t.: Adaladala, minomino foana befahatany. • t.i.f.: Mitaontaona. Ahitsio
Taontaonkafa : o.: Teny entimilaza ny feon'ny kankafotra, na io vorona io mihitsy koa. Ahitsio
Taoriana : p. mt.: Ny teny hoe "aoriana" ialohan'ny mariky ny lasa "t" ka ampiasaina hilazana fotoana: Tonga taorian'ny zandriny izy. (Marihina fa samy hafa amin'ny "tao aoriana" io, izay misy ny teny "aoriana" ihany fa ialohan'ny "tao" milaza toerana, ka ampiasaina kosa hilazana toerana: Nipetraka tao aorian'i dada aho). Ahitsio
Taovany : a.: Izay rehetra ao anatin'ny tenan'ny biby vonoina — ivelan'izay antsoina andavanandro hoe hena — toy ny voany izany, ny fony, ny atiny... nefa voafaoka ao anatin'ny taovany koa ny lohany. Ahitsio
Taozavatra : a.: Fanamboarana ny zavatra vita-Nanahary ho zavatra azon'ny olombelona hanina na ampiasaina amin' izay mahasoa azy: Ny taozavatra no ananana izay mahasoa: sakafo, fitafiana, trano. Ahitsio
Tapahina : (tapaka) mt. ih. (tapaho): Zaraina tarangana roa: Tapahina ny tady. • A-janona, ampiatoina: Aza tapahinao ny teniko, • Araikitra, anaovana didy: Vao notapahina fa hianatra indray amin'ny Alakamisy izao. • Tsy avala handeha: Notapahin'ny sasany ny rano. • Vitaina, faranana: Notapahina haingana ny asa fa samy maika hody. / Tapa-ho haingana ny hevitrao. Ahitsio
Tapaka : a.: Enti-milaza zavatra voadidin-java-maranitra ka tarangana mizara roa misaraka er?: Tapaka ny tehiko. • Enti-milaza teny na rasa-ka voatery haato noho ny fisalovanan'ny hafa na fitrangan-javatra tsy nampoizina: Aza fada, fa tapaka ny resatsika noho ilay kotrobaratra tao. • Nanaovana didy hentitra: Tapaky ny manam-pahefana fa tsy hankalazaina ho fetim-pirenena intsony ny 14 Oktobra. • Miato, mijanona: Tsy tapa-ka ny orana nandritra ny hefarana. i t. f f.: Tapahina, voatapaka, tinapaka 1 manapaka, fanapaka, mpanapaka 1 anapahana, fanapahana 1 mitapaka, fitapaka 1 mifanapaka 1 mahatapaka 1 tapatapaka. Ahitsio
Tapatapakahitra : a.: Resadresaka mahasoa amim-pihavanana, dinidinika. Ahitsio
Tapelaka : a.: Zavatra mifanosontsosona azo selatselahina toy ny kiran-trondro. Ahitsio
Tapelaka : p, t.: Enti-milaza felan-javatra lehibe velarana no fisaka. Ahitsio
tapelaka : mipelaka:midika fisaka na mivelatra be.ravina tapelaka Ahitsio
Tapenaka : a: Ny tapany ambony amin'ny rindrin'ny sakantrano, izay atao telozoro, ka ny lohany maranitra ambony no atao hipetrahan'ny vovonana, ary dia io tendrony maranitra io no atao hoe lohatapenaka. Ahitsio
Taperina : (tapitra) mt. ih, (tapero): Vitaina, faranana: Tapero izato resakareo fa efa alina ny andro. • Lanina: Notaperin'ny saka lahy ny ronono. • (Vola) Aloa daholo tsy asiana sisa mijanona: Hotaperiko amin'ny herinandro ambony ny uolanao. Ahitsio
Tapia : a.: Karazan-javamaniry izay antonontonony ny habeny, maniry indrindra any amin'ny faritanin'Imamo ary fihinana ny voany no sady fanao sakafon'ny bibindandy ny raviny. Ahitsio
Tapiaka : a.: Feon'ny zavatra mitefoka mafy, toy ny hazo mirefotra raha tapahina. - t.i.f.: Mitapiaka. - F.-p.: Tapia-koho: feo na fanenon'ny hoho akasika ho-ho hafa. Ahitsio
Tapihina : (tapika) mt. ih, (tapiho): Pehina (araka ny voalaza amin'ny tapika ft.): Nahoana no tapihinao ny uatomamy ety an-tananay nefa isika tsy niombona tapika akory? Ahitsio
Tapika : na Tapiny a.: Enti-milaza zavatra vitsivitsy, tsy betsaka, anatin'ny maro: Tapiny ihany no hitanay tamin' ireo tompon-tany, fa raha vao tonga izahay dia Lasa niery daholo ny ankamaroany. • Singantsingany mialoha lalana ary manambara ny maro mbola eo aoriana. - F,-p.: Tapi-balala: valala vitsivitsy miseho mialoha, ka ahalalana ny ho avy avy aoriana. / Tapik'olona na tapikan'olona: olona vitsivitsy monja. / Tsy misy tapik'olona na iray akory aza: tsy misy na dia olona iray akory aza. Ahitsio
Tapika : a.: Kilalao ifanaovan' ny ankizy manao izay hianjeran'ny zavatra eny an-tanan'ny namany amin'ny fipehana azy, ka raha latsaka dia lasany na isasahana aminy: Miombona tapika. - t.i.f.: Tapihina, voatapi• ka 1 manatapika, fanatapika, mpanatapika 1 anatapihana, fanatapihana 1 mahatapika. Ahitsio
Tapitapy : Tsitapitapy a.: Fiatoatoan'ny rano mitete na zavatra milatsaka fa tsy migororoana na migorodana; fahatongavana na fandalovans amin'ny toerana iray, ka tsy tonga indray mandeha fa ny iray na ny vitsivitsy aloha no mandalo; fiatoana, fampoelana. - t.i.f.: Atapitapy, voatapitapy, tafatapitapy 1 mitapitapy, fitapitapy, mpitapitapy 1 itapitapiana, fitapitapiana 1 mitsitapitapy. Ahitsio